मानिसको अनौठो रहर: निधारमा सिङ, जीउमा साढे ४०० प्वाल (भिडियो हेर्नुस्) - Sansar Dainik
मानिसको अनौठो रहर: निधारमा सिङ, जीउमा साढे ४०० प्वाल (भिडियो हेर्नुस्)
October 30, 2020 adminLeaveaComment on मानिसको अनौठो रहर: निधारमा सिङ, जीउमा साढे ४०० प्वाल (भिडियो हेर्नुस्)
एजेन्सी । मानिसले आफुलाई अरु भन्दा फरक देखाउन अनेक उपाय गर्ने गर्छन । एउटा ब्यक्तिले विश्व रेकर्ड कायम गर्न गरेको अनौठो तरिकाले सबैको ध्यान तानेको छ । जर्मनीका एक ब्यक्तिले विश्व कीर्तिमान कायम राख्न शरिरका अंगहरुमा अनौठो परिवर्तन गरेका छन् ।
उनको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा उनले भनेका छन्, आफ्नो जीउमाथि यतिधेरै प्रयोग गरिसकेपछि पनि उनलाई चित्त बुझेको छैन । जीउलाई परिवर्तन गराउने कार्य अझै जारी रहन्छ ।
बुखोल्च भन्छन्, ‘शरीर परिवर्तनको कार्यले केवल मेरो बाहिरी आवरण मात्रै फेरिएको छ । यसले मलाई बदलेको छैन । म त उही मान्छे नै हुँ ।’ बुखोल्चका शरीरमा ४५३ वटा प्वाल पारिएको छ । त्यस्तै शरीरका सबैजसो ठाउँमा टाटु छन् भने जीउमा टुटुल्को उठाउनका लागि छालामुनि प्रत्यारोपण समेत गरिएको छ ।
यसअघि सन् २०१० मै उनले जीउमा सबैभन्दा धेरै प्वाल छेड्ने मानिसको रुपमा गिनिज बुकमा नाम लेखाइसकेका थिए । हालै गिनिज बुकले उनको भिडियो शेयर गरेसँगै उनी पुनः चर्चामा आएका छन् ।
छोरी जन्माएको १ घण्टामै आमाको मृत्यु, परिवारसँग शिशुका लागि दूध किन्ने पैसा समेत छैन !
महिलाहरूमा ४० काटे पछि फेरि बैंस आउछ : अध्ययन
भारतमा मुस्लिमहरुको पार्टीले किन जलायो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा ? (भिडियो सहित)
एक महिला जसले ३७ लाख श्रमजीवीको आवाज बोलिन् (भिडियो सहित)